South-Africa Archives - Page 2 of 2 - Sawirrotv
July 29, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town, ayaa sheegaya in halkaasi lagu gubay goobo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajinebi ah. Waxaa banaan baxyo rabshada watay oo looga soo horjeeday Dowlada Hoose ka dhaceen deegaanka Mbkweni oo qiyaastii 70 km u …
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Safar ku Gaaray Magaalada Johannesburg ee Dalka South-Africa (SAWIRRO)
July 13, 2016 – Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Sh. Cismaan Jawaari ayaa booqasho gaaban ku gaaray magaalada Johannesburg ee Dalka South-Africa. Jawaari ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannseburg kusoo dhaweeyay Madaxda Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Dalkaasi iyo qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkaasi. Wuxuuna yiri. “ Waa …
June 25, 2016 – Deegaano hoos taga magaala madaxda Dalka K/Afrika ee Pretoria oo maalmihii ugu dambeyay uu boob iyo barakac loogu geystay ganacsatada soo galootiga ah ee ku nool dalkaasi ayaa hadda deggan, waxaana jira dhalinyaro soomaali iyo itoobiyaan isugu jiro oo ay dhaawacyo ka soo gaareen intii ay socdeen rabshadahaasi. Tuulooyinka boobka loo …
Beeraleyda Cadaanka Ah ee Dalka South-Africa oo Lagu Soo Rogay Sharci Lagu Xadidayo (VIDEO)
May 28, 2016 – Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika oo ay u badanyihiin dadka madowga ah ayaa Khamiistii shalay si rasmi ah u ansixiyey sharciga cusub ee hantida dhulka. Sharcigan ayaa qoraya in dowlada ay iibsan karto dhulka ama beeraha sida gaarka ah loo leeyahay xataa hadii shaqsiga leh uusan dooneyn inuu iibiyo. Dhulka ama beeraha …
Dadka Cadaanka ah ee South Africa oo ku Qanacsanayn Sharci Dhawaan la Qaatay
May 27, 2016 – Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika oo ay u badanyihiin dadka madowga ah ayaa Khamiistii shalay si rasmi ah u ansixiyey sharciga cusub ee hantida dhulka. Sharcigan ayaa qoraya in dowlada ay iibsan karto dhulka ama beeraha sida gaarka ah loo leeyahay xataa hadii shaqsiga leh uusan dooneyn inuu iibiyo. Dhulka ama beeraha …